Wagardhac/Mareexaan Wey Digeysaa
Garoowe, 31 Oct 2012 (AllDhooftinle.com)
Qabiilka Wagardhac ee Marexaan Ayaa Digniin Culus U gudbiyey Maamulka Puntland.
Anigoo ku hadlaya magaca dhamaan wax garadka Beesha Wagardhaceed ee Sade Daarood, Sida: Nabadoonada, Siyaasiyiinta iyo Columo Awdiinka waxaan digniin usoo jeedinaynaa Maamul Gobaleedka Puntland, gaar ahaan Masuuliyiinta Maamulka Gobalka Bari: Gudoomiyaha Gobalka, Taliyaha Booliiska, Taliyaha Nabad Sugida, Gudoomiyaha Maxkamada Gobolka iyo dhamaan dadkii ku luglahaa dacwada Maxamed Abshir Cartan oo ka mid ahaa ardaydii wax ka baran jirtay Gobolka Bari.
Maxamed Abshir Cartan oo ahaa arday ayaa lagu soo eedeeyay danbi uusan ku luglahayn; Dhagaysigii dacwadiisii ka dib ayay maxakamdu cadaysay in aan Maxamed Abshir Cartan wax danbi ah lagu haynin, oo ay amartay in lasii daayo. Ragii soo xirtay xabsigii ayay dib ugu celiyeen, internetkana waxay ku baahiyeen in uu danbiile yahay. Baaritaan dheer ka dib waxaa cadaatay in sababta Maxamed Abshir Cartan dulmiga intaa le'eg loogu samaynayaa ay tahay arin qabiil. Magacii la'rabo haloo baxiyee, Soomaali Abtiriskeedu qabiil buu ku gabagaboobayaa. Maxamed Abshir Cartan dadkii soo qabtay, kuwii kudooday, kuwii xukumah iyo kuwii dilaaba dad iyo hayb ayay leeyihiin. Ehelada Maxamed Abshir Cartan waqti dheer ayay dhalashada iyo nabadaba xeerinayeen, hadana waxaa fiican in aan is xasuusino wanaagu hal dhinac kama socon karo ee nabada hala dhowro.
Waxaa aad u wanaagsan in aan is dareensiino muhiimada nabada iyo cadaalada. Maanta Shayga Soomaali ugu baahi badantahay waa nabad, waxaa haboon qofkii haystaa in uu illaaliyo, kii aan haysana uu baadi goobo.
Abwaan Soomaaliyeed oo gabay ku cabiray nabada iyo collaada ayay tuducdaani ka mid ahayd gabagiisii qiimaha badanaa:
Carwa buuxda, bakhaarada camiran, bacadle cayn cayn ah
Gaadiid caraabo iyo subax calan wanlaynaaya
Cood kuu kordhaaya iyo ribbix nabad cudoonbaa leh
Cabanaan dhexdood ceegsatiyo, caashaqiyo heesta
caraabada jalbeebsiga fadhiga shah casariyaynta
sheeko laysu celiyoo kaftana nabad cudoonbaa leh.
Asaydii cadayd dumarkoo sidoo ciil la hoganaaya
qabuuraha la ciidbixiyo maydka cigan meesha
Gorgor cunaya caloolaha barbaar Guluf colaadbaa leh
Ugu danbayntii waxaan hadalkayga ku soo gabaganayaa xadiiskii nabiga (SAW) oo ahaa "Fidnadu wey huridaa ee nacaladi ha ku dhacdo kuwa toosiya"
Nabadoon: Maxamed Axmed Guure (Guushaa)